Zvinhu munyika munyaya dzezvehutano zvaramba zvakaita manyama amire nerongo sezvo vanamukoti muzvipatara zvekanzuru vatanga kuramwa mabasa ukuwo hurumende iri kutatarika kugadzirisa dambudziko ravanachiremba muzvipatara zvehurumende vapedza mwedzi miviri vachiratidzira.
Studio 7 yashanyira chipatara cheParirenyatwa nhasi ikaona kuine varwere vashoma shoma. Vakuru pachipatara ichi vange vachienderera mberi nekutonga vanachiremba vari kuramwa mabasa. Matare aya akatanga nemusi weChishanu uye vamwe vanachiremba vachatongwa nemusi weChitatu.
Sachigaro weHealth Service Board Dr Paulinus Sikosana vaudza Studio 7 kuti nemusi weChishanu vanachiremba havana kuuya kumatare avainge vadanwa kuti vapindure kuti sei vari kuramba kudzoka kubasa sezvakaturwa nedare reLabour Court.
Pavabvunzwa neStudio 7 kuti pane vati vadzingwa here, VaSikosana vati kupindura mubvunzo uyu kungava kufukura hapwa.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Doctor Masimba Dean Ndoro vaudza Studio 7 mushure memusangano wavaita nenhengo dzavo nhasi kuti dai hurumende yatsvaga nzira dzekuita hurukuro navo kwete kuramba vachitora nzira dzisingagadzirisi dambudziko riripo.
Asi Doctor Sikosana vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro navanachiremba ava chero nguva. Vati svondo rapera vakatomboita hurukuro asi zvakakona n’anga murapwa achida.
Zvichakadaro, vanamukoti muzvipatara zvekanzuru vatangawo kuramwa mabasa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare VaMichael Chideme vatenda kuti vanamukoti vatanga kuramwa mabasa uye vati vari kuyedza kutaurirana navo.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiri wesangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union VaCosmas Bungu sezvo vanzi vange vabuda muhofisi vachisiya nharembozha yavo.
Makirinika akawanda muguta reHarare ndeekanzuru uye kuramwa mabasa kwavanamukoti kuchapa kuti zvinhu zvitonyanye kuipa muguta rinomboita zvirwere zvakaita setyphoid necholera uye ikozvino mwaka wekunaya.
Vaimbova gurukota rezvehutano uye vari nhengo yeMDC Doctor Henry Madzorera vashora hurumende nekupedza mwedzi miviri isina kugadzirisa dambudziko ravanachiremba vari kuramwa mabasa. VaMadzorera vatiwo idambudziko rehurumende kuda kunenedzera nekusvora vamwe kunyange vari ivo varikukanganisa.
Studio 7 haina kukwanisawo kunzwa kubva kugurukota rezveutano VaObadiah Moyo asi mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa svondo rapera vakaudza vechidiki vebato reZanuPF kuti pane vari kunyengedza vana chiremba kuti vasadzokera kumabasa kuti hurumende yavo igoshorwa izvo vanachiremba vari kuramba.